WordPress ကိုဝင်းဒိုး Live ရေးသားသူ | Martech Zone
WordPress ကို Windows Live စာရေးသူ
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 26, 2011 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 19, 2014 Douglas Karr
အချို့သောသူများသည် WordPress ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့် web-based တည်းဖြတ်ခြင်းကိရိယာများကို အသုံးချ၍ ရနိုင်သည်။ သူတို့ကိုငါအပြစ်မတင်ပါဘူး၊ ကြွယ်ဝသောတည်းဖြတ်ရေးကိရိယာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် HTML ရေးသားခြင်းကိုကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များတွင်ရေးပါ။ Microsoft Windows သုံးစွဲသူများအတွက်ယနေ့ညမှာကျွန်ုပ်သည် client ကိုပြသခြင်းအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ Windows Live Writer ပါ.
Windows Live Writer သည်နှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကတည်းကရှိခဲ့ပြီး WordPress တွင်ပါ ၀ င်သည် API ကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်က enable ။ သင်၏အခင်းအကျင်းကို Windows Live Writer တွင်ပင် download လုပ်နိုင်သည် ဖြစ်၍ သင်ဘလော့ဂ်၏အသွင်အပြင်နှင့်တိုက်ရိုက်ရေးသားနေပုံရသည်။
ပထမအဆင့်မှာသင်၏မူကြမ်းများနှင့်တင်ပို့ချက်များကိုအင်တာနက်မှတဆင့်ထုတ်ဝေနိုင်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို WordPress အုပ်ချုပ်မှု၏ Settings> Writing အပိုင်းတွင်ပြီးမြောက်စေသည်။
နောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ Windows Live Essentials 2011။ Live Essentials နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့် load လုပ်ရန်သတ်မှတ်ထားသည့် application များအနည်းငယ်ရှိသည်။ Live option ကိုသင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း install လုပ်နိုင်ရန်အတွက် optional applications များအားလုံးကို uncheck လုပ်သည်။
ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ဖွင့်လှစ် တိုက်ရိုက်စာရေးဆရာ ပြီးလျှင်သင်၏ blogging platform - WordPress ကိုရွေးချယ်ပါ -
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့သင့်ဘလော့ဂ်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ဘလော့ဂ် URl၊ သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုသာရိုက်သင့်ပြီး၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သင်မေးသောအခါ၊ သင့် blog blog ကို download လုပ်ရန်အကြံပေးလိုသည်။ သို့မှသာသင်အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းတို့ရေးသားသည့်အခါသင့် blog post များ၌ခံစားရလိမ့်မည်။
Live Writer သည်သင်၏အခင်းအကျင်းနှင့်အမျိုးအစားများကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်သင်သွားသင့်သည်။
သင့်ဘလော့ဂ်ကိုမီနူးမှရွေးချယ်ပြီးဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုကိုထည့်ခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက်မူကြမ်းအဖြစ်ဘလော့ဂ်သို့ပို့ပါ။ WordPress သို့ဝင်ပါ၊ စာမူများကိုနှိပ်ပါ၊ သင်၏မူကြမ်းကိုထိုတွင်တွေ့ရမည်။
Tags: iphone5ဘာသာရပ်လိုင်းiphone5ဘာသာရပ်လိုင်းအရှည်မိုဘိုင်းဘာသာရပ်လိုင်း windowsမိုဘိုင်းဘာသာရပ်လိုင်းအရှည်မိုဘိုင်း
နိုဝင်ဘာလ 13 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 10:17 နာရီ
ကျွန်ုပ်၏ windows သည် wordpress အတွက် အားလုံး အဆင်ပြေသော်လည်း ပုံတစ်ပုံကို ထည့်သွင်းပြီး ဘလော့ဂ်သို့ အပ်လုဒ်လုပ်သောအခါတွင်၊ wordpress ဘက်တွင် HTML ကုဒ်နှင့်တူသော ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကို ရရှိပါသည်။ ဒါကို ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါလား???
14:2011 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 24
K Milloy မသေချာပါ - သို့သော် ၎င်းသည် ကုဒ်နံပါတ်ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ WordPress တွင် အချက်အလက်အချို့ရှိသော်လည်း၊ http://codex.wordpress.org/Windows_Live_Writer_Help